Eyewash Station, jaakada, deminta habboon - Anhang
Forces Eyewash Station
Wall-dhajinta Eyewash Station
Xumbo Life jaakada
Buufin Life jaakada
Buufin Life huuri
Thow-badan buufin Life huuri
Thow-badan Self-Righting buufin Life huuri
Large Thow-badan Self-Righting buufin Life huuri
Loo diridoonaa-bilaabay buufin Life huuri
Open karo buufin Life huuri
Dooni u isticmaala buufin Life huuri
Life jaakada Light
Life huuri Light
Dambiisha Nooca bareelo
Lafdhabarta Plate bareelo
Wadnaha iyo kicinta Plate
Aluminum Daawaha Ambulance bareelo
Aluminum Daawaha jaranjarada bareelo
Lugta jar Kabay
Sabaysiin karto Life Saving-Line
Dabka habboon hortagidda
Dabka Entry habboon
dab damiye Kit
Shaandhaynta Is-Samatabbixinta siiye
Emergency Device Neefsashada u baxsado, (EEBD)
Is-jira Qalabka lagu neefsado (SCBA)
Electric Long Tube siiye
Is-Priming Long Tube siiye
Dhaqaajin karo Long Tube siiye
Deminta tubbo Reel
Dabka tubbo Box
gaas & maaskaro
Full Face Gas & maaskaro
Half Face Gas & maaskaro
Chemical Protective habboon
Si buuxda u raacsiisay Chemical Protective habboon
Semi raacsiisay Chemical Protective habboon
Portable Nooca xumbo Applicators
Control jeeda Device
Retardant Fire Xarig
Dabka Samatabbixinta Jump barkin
Quusitaanka qoyan ku habboon
Quusitaanka qallalan habboon
Si buuxda u raacsiisay habboon Quusitaanka
Control sabaynta Device (BCD)
Quusitaanka Air dhululubada
Gloves Quusitaanka, Hat iyo sharabaaddo
Quusitaanka Flash Light
Quusitaanka Ding eekoow
Half Face Quusitaanka maaskaro
Full Face Quusitaanka maaskaro
Device Quusitaanka Isgaarsiinta
Quusitaanka Kale Air Source
Maaskaro Quusitaanka Strap
Quusitaanka Kit Bag
Qaadaan Quusitaanka Bag
Marine saliida leh Water SEPARATOR
Filter Waayo Marine saliida leh Water SEPARATOR
Marine Bulaacadda Daaweynta Plant
Marine Isgaarsiinta Oo Navigation Device
Nidaamka Aqoonsiga Automatic Marine (AIS)
Marine Goobidda iyo Samatabbixinta Radar Transponder (SART)
Chart Marine System Electronic (ECS)
Dhexdhexaad Frequency High Station (Ji / HF)
Inta Aad High Station (VHF)
Maritime Satellite Taleefanka
Emergency Jago tilmaamay Radio Beacon (EPIRB)
Personal Tusaha Beacon (PLB)
Had iyo tayada ee meesha ugu horeysa oo si adag u kormeeraan tayada alaabooyinka ee geedi socodka kasta.
Our Factory ayaa koray galay Premier ISO 9001: 2015 saaraha Certified ah ee tayada sare, waxyaabaha kharash-ool ah.
saaraha Professional ah oo ka badan 2000 noocyada kala duwan ee wax soo saarka. Our warshad (Jiangsu Anhang Marine Qalabka Co., Ltd.) waxa uu ku yaalaa Dongtai, gobolka Jiangsu, Shiinaha.
Waxa ay u badan kuu haboon in si habeenkii ama sida aad mashquul tahay. No more sugaya in la maqlo ku saabsan waqtiga hogaanka ama dib-amarada -see waxa sahlan loo heli karo oo si waxa aad doonayso N0W.
Guji & SUG
Baarka loo dhiibi karaa in ay meel kasta oo dunida 7 maalmood oo shaqo gudahood. Waayo, amar bulk, shirkadda ugu dhaqsiyaha badan maraakiibta la dooran doono. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa in guji oo sug.
Sida PayPal xaqiijin kula baayacmushtari jirtay, waxaanu kuu soo bandhigi ammaan ah 100% iyo shopping online sahlan. Aqbalayno T / T, L / C, PayPal, Western Union iyo credit card sida shuruudaha lacag bixinta.
Is-jira Neefsashada nabadgelyada (SCBA)
Caaga Portable Eyewash Station
Baadh qaar ka mid ah ugu dalabyada noo soo saarka caan ah.
Our Popular Partner
Waxaan leenahay wada-hawlgalayaasha badan oo fiican adduunka oo dhan
Jiangsu Anhang Marine Qalabka Co., Ltd. Waa kuwee waxaa loo bedelay oo ka Dongtai City Anhang Marine Qalabka Factory la casriyeeyay. Caasimadda ah ee diiwaangashan shirkadda waa 10,88 million RMB, iyo nooca ay shirkadu waa shirkad liability kooban. Shirkadda midaynaysa cilmi sayniska, wax soo saarka, iibinta iyo is-dhexgalka, iyo waxyaabaha ay si joogto ah u iibin jireen inay suuqyada dibadda.
Biyaha biniaadminimo ee kala go, Samatabbixinta buoy, Life huuri Light, Life Search Light , Radar-dhaanta , Solas boodin , Radar Sensor,